Hayyuu Duree ODA: ‘Wanti adda nu godhu Paartii Dhaloota Qubee ta’uudha’ – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHayyuu Duree ODA: ‘Wanti adda nu godhu Paartii Dhaloota Qubee ta’uudha’
Hayyuu Duree ODA: ‘Wanti adda nu godhu Paartii Dhaloota Qubee ta’uudha’
Filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa gaggeessuuf ji’ootni wayita hafanitti dhaabni siyaasaa Oromiyaa keessatti ”Dhaloota Qubeerratti’ ‘xiyyeeeffatee socho’u moggaasa Gamtaa Dimkooraatawaa Oromoo ykn ODA jedhuun hundaa’eera.
(bbcafaanoromoo)–Hayyuu Duree dhaaba haaraa kanaa ta’anii kan filataman kaadhimamaan PhD mummee Constitutional Law Yunivarsiitii Finifnnee kan ta’an barsiisaa Sulxaan Qaasim.
Gamtaa Dimkooraatawaa Oromoo(Oromo Dimocratic Aliance) ALI Onkololessa 23 bara 2012 Oromoota dhimmi sabaa isaan yaachisu harki caalaan isaanii hayyuuwwan Yunivarsiitilee Oromiyaa keessatti barsiisan ta’uu Obbo Sulxaan BBC’tti himaniiru.
”Ogeeyyiin kun siyaasa biyyattii qorachaa turre Siyaasa Oromoo keessatti qaawwaafi rakkoo jiru furuuf dhaaba siyaasaa haaraa hundeessuu waan feesiseef hundessinee” jedhan.
Paaritiin kun sagantaa siyaasaafi imaammatoota biyyaaf bu’aa buusu jedhan qopheesse filannoo bara kana ni adeemsifama jedhamee karoorfame irratti himaachuuf hojjechaa akka jirus BBC’tti himan.
Kanaafis ”Boordii Filannoo Biyyaalessaa Itoophiyaatti dhaaba Siyaasaa naannoo Oromiyaa keessatti socho’u ta’ee beekamtii argachuuf ji’a lama dura iyyata galfanneerra” jedhan.
”Wajira banannee, ummata waliin walarguu akka dandeenyu, deeggarsi barbaachisu akka nuuf godhamus xalayaa deeggarsaa Boordii Filannoo irraa arganneerra.”
Oromiyaa keessatti dhaabbileen siyaasaa dantaa Oromoof qabsaa’uuf hundaa’an hedduun bakka jiranitti waan addaa dagatameef xiyyeeffannoo kennuun ijaaramuu keenyatu adda nu godha jedhu Obbo Sulxaan.
”Paartii Dhaloota Qubee jennee of waamna, ummatnis haala kanaan akka nu hubatu barbaanna” kan jedhan Obbo Sulxaan, ”dhaloonni bilisaa, dhaloonni haaraan kun ilaalchaafi kallattii haaraan siyaasa Oromiyaa fi biyyaa sochoosuu qabna yaada jedhuu qabna” jedhan.
Adeemsi siyaasaa biyyattii kanaa shiraa, walshakkii fi waan adda addaan xaxamee bu’aa barbaadamu fidaa waan hin jirreef dhalootni haaraan kana keessaa haala itti bahuu dandeenyu akeeka abdi jedhu qabnas jechuun dubbatu.
Dabalataan ammoo ‘qaamni hawaasaa, siyaasaa gidduugalaa irraa moggeefame jira, keessumattuu horsiisee bulaan, ijaaramee rakkoon isaa furamuufi qaba” ilaalcha jedhu akka qaban nutti himan.
Siyaasni biyyaa gidduugala biyyaarratti kan daangeffameedha, gara moggaa biyyaatti bahee hunda hammataa ta’uu qaba, sanirratti hojjennaa jedhu hayyuu dureen dhaaba ODA obbo Sulxaan Qaasiim.
”Jalqaba irratti gurmaa’uun mirga heeraatii” jedhan. Itti aansuunis ”paartileen hanga ammaa jiran iddoon isaan hin ilaaliin jiraa” jedhan.
”Namoota Oromoof qabsaa’aa turan, wareegama kaffalaniif kabaja ni qabnaafi Sadarkaa amma irra jiruun garuu ilaalcha haaraa Oromoo guutuu tokkomsee demutu barbaachisa, kuniis dhaloota haaraa kan keessaa burquu qaba yaada jedhu qabna” jedhaniiru.
Bu’uurri deeggarsaa isaaniis uummata Oromoo guutuu akka ta’u fi harki caalaan dhaloota haaraa(dargaggeessa) ta’u dabalanii himaniiru.
Dhaabni haaran kun hirmaannaa siyaasaa dubartootaa harka walakkaan gahuuf kan karoorfatu akka ta’eefi ammatti dhibbeentaa 30 irra akka jiru nutti himaniiru.
Dhaabnii kun haaraya.
Kan nama ajaa’ibu,
1ffaa, gaafa sabnii oromoo iyyee dhaabbilee duraan Turan Gama tokkootti fiduuf hayyuufii manguddoonnii quuqama Saba kanaaf qaban hundi irraatti dadhabanii, 11 keessaa dhaaba 3 qofatti deebiisanii, sadan sanuu, GAADDISA HOOGGANSA OROMOO jechuun mataa walittii qabamee jiranitti, dhaabnii ODA jedhu kuni koophaatii ijaaramuu isaati.2ffaa_ otuu seeraaf heera filannoo hin guuttanne, otuu sabni maalummaa dhaabichaatu hin hubannee paartii oromooti na filadhaa jedhee dhufuu isaati.
Akeekkachiisa Xumuraatu kennameef!
~Firoonni namicha kanaa dafaa nama kana achii baasaa; bor boo’uufiin gatii hinqabu!
Obbo Gabbisaa Bajigaa jedhama. Godina Kibba Lixa Shawaati. Magaalaa Tajii ‘Taabota Silalasee jala. Dargaggootaafi Qeerroowwan Oromoo addaan qooduun diinummaa facaasaa ture; itti jiras. Namni kun kana duras sabboontota daguugsisaa kan tureefi dabarsee tika Wayyaaneetti kennuun nama coomedha. Abbaan Torbee Kibba Lixa Shawaa keessa deddeebi’aa jiru carraa isa dhumaa naannoo sana gadi lakkisee akka deemuu dhaameeraaf. Ta’uu baatee ammaa ka’ee hojii diigumsasaafi Oromoota sabboontota qaqaalii Gandaafi naannoon kan qoodu yoo ta’e itti fufee akka hinjiraanne, manniifi qe’eensaa hundi akka daaraa ta’an dhaamamaeeraaf.
Based on the recent ODP meeting in Adama, we can see there is a growing conflict between ODP members its leadership.
Oromoon kumaatamni mana hidhaa keessaatti dararamaa waan jiruuf nama tokko nuuf ba’e jennee dhiichisuu hinqabnu.